လင်္ကာ: Occupy Burma! 1
Occupy Burma! 1
occupy burma! ပါတဲ့။ဆောင်းပါးရှင်က စစ်အာဏာရှင်ကနေအရင်းရှင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသွားချင်နေကြ သလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ယှဉ်ရင် တရုတ်ကတော်ပါသေးသတဲ့။ NLDနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း တော်တော်ဝေဖန် ထားပါ တယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူထုရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီးချီတက်ဆန္ဒပြရဲပုံလည်း မရဘူးလို့ ဆောင်း ပါးရှင်ကဆို တယ်။ တော်တော်ရှည် တဲ့ဆောင်းပါးရှည်ကြီးပါ။ဆောင်းပါးရှင်အာဘော်ကို သဘောမျှကြ ရင်ဖြင့် စာရှုသူတို့ သည်လည်းခေတ်မှီ စွာဖြင့် Occupy Burma ! လိုက်ကြယုံ။
by FNG on April 11, 2012
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာက အတွေး အမြင်တွေ အဖြစ်အပျက်တွေကို ရယူတဲ့ နေရာ မှာ ခြေ တလှမ်း အမြဲ နောက်ကျခဲ့တယ်။ တချိန်က မာ့စ်ဝါဒ၊ လီနင်ဝါဒ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ရောက် လာတဲ့အချိန်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားပြီးနောက် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်နောက် ကျခဲ့တယ်။ ကားလ်မာ့စ် အရင်းကျမ်း ရေးခဲ့တဲ့ အချိန်ထက် နှစ်ပေါင်း ၇၀လောက်နောက်ကျခဲ့တယ်။
တိုတယ်ဖီနာက ပြင်သစ်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ဖျက်ဆီး မှုတွေဆိုတာ ကလည်းကမ္ဘာကျော်ပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံထဲက ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွေ ရဲ့ အလုပ်သမားတွေ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာကျော်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်က ပိုဆိုးတယ်။ အမေရိကန်ဟာ နိုင်ငံတကာကိုလက်နက်နဲ့ ကျူးကျော်ဖျက်ဆီးခဲ့ တာ မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် များ တယ်။ တရုတ်မှာ အဲသလို လက်နက်နဲ့ကျူးကျော်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဒီနေ့အထိ မရှိသေးဘူး။ ဒီနေရာမှာ တရုတ်က အမေရိကန်နဲ့ စာရင်တော်သေးတယ်။
(ဒါပေမဲ့ နောင်မှာ တရုတ်လည်း ဒါမျိုး ရှိမလာလို့တော့ အာမမခံနိုင်။ နောင်မှာ တရုတ်စစ်ရေးအင်အား ကြီးလာတဲ့ အခါ ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုမပြောနိုင်။)